Manan-Javatra Iray Na Roa Hambara Ny Mpitsikera Ny Fahitalavitra “Tsy Mitaiza” Any Pakistana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jolay 2016 4:14 GMT
Saribe iray ho an'ny Udaari. Sary tao amin'ny Wikipedia.
Vao nandefa “fangataham-panazavàna” momba ny resaka tantara mitohy mampihoron-koditra izay miresaka ny fanararaotana ara-nofo atao amin'ny ankizy taminà fahitalavitra iray ny Manampahefana Mandrindra ny Haino Aman-jery Elektronika any Pakistana (PEMRA). Takian'ilay “fangataham-panazavàna” ara-dalàna amin'ilay tambajotra ny hanamarinany ny filàna ny fandefasana io tantara mitohy io. Raha tsy mahafa-po ireo mpandrindra ny valintenin'ilay tambajotra dia handoa onitra sy ho voasazy izy. Takian'ny PEMRA ihany koa ireo foibe fandefasana fahitalavitra rehetra manerana ny firenena mba hanazava ny antony andefasany ireo doka momba ny fanabeazana aizana.
“Udaari,” ilay tantara mitohy amin'ny fahitalavitra no resahana eto, tantara mampihoron-koditra izay mifantoka amin'ny fanilihana ny vehivavy amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toekarena sady manasongadina olana toy ny fampiasàna sy fanararaotana ara-nofo ny ankizy. Takian'ny PEMRA ny ahafantarana ny antony andefasan'ny tambajotra ny fandaharana izay faritany ho toy ny ” votoaty tsy mitaiza.”
Mahakasika indrindra ilay fizaràna niseho tamin'ny 8 May, izay nanararaotan'ilay lehilahy, nolalaovin'i Ahsan Khan, ireo ankizy roa ( zanaky ny iray tampo kamboty sy zaobavy ao amin'ilay tantara) ilay fangataham-panazavàna.
Araka ny Sahil, vondrona iray mpiaro zon'olombelona mifantoka amin'ny ady amin'ny fanararaotana ankizy, dia trangam-panararaotana ankizy mitontaly 3.768 no naharaisana tatitra tany Pakistana tamin'ny 2015. Araka ny isa ôfisialy voarakitra, tombanan'ny Shali fa manodidina ny 10 eo ho eo ny ankizy iharan'ny fanararaotana isanandro any Pakistana ny taona 2015. ( Mbola ambonin'izany ny tena isa marina, satria maro, raha tsy ny ankamaroan'ny tranganà fanararaotana, no tsy voarakitra mihitsy)
Lazain'ny PEMRA fa ny fandaharan'ny fahitalavitra tahaka ny “Udaari” dia “mandrisika ny olon-dehibe hanararaotra ara-nofo ny ankizy”.
‘Fampanginana ny Lafy ratsy ?’
Voatsikera ny PEMRA noho ny famoretany ny “Udaari” izay ankasitrahan'ny olona maro sady malaza amin'ny fanehoany ny tena olana misy marina any Pakistana.
Ny mpisera amin'ny Twitter, Shahwar A. Khan, ohatra, dia nilaza fa tsy misy fitondrantena ratsy momba ny fitantaràna fanararaotana atao amin'ny ankizy :
Tsy zavatra ratsy tsy mitaiza izany ny Udaari. Ny fiarahamonintsika izay hampanginantsika ny olona iray mampijery antsika ny lafy ratsin'ny ataontsika no tsy mitaiza.
Saadia Khan, mpiaro ny zon'olombelona, dia nanoratra tao amin'ny Twitter hoe heveriny fa tokony ireo olana maika kokoa no ifantohan'ny PEMRA :
PEMRA should focus on banning glorification of #misogyny and #patriarchy on tv rather than real issues #ISupportUdaari
Ny fandraràna ny fanindrahindràna ny #misogyny (fankalàna vehivavy) sy ny #patriarchy (fanjakàn-dehilahy) ao amin'ny fahitalavitra no tokony himasoan'ny PEMRA fa tsy ny tena olana #ISupportUdaari
Tsy ela, dia nisy tenifototra fanohanana nanomboka nivezivezy tao amin'ny Twitter, toy ny hoe :
#ISupportUdaari , one of the bravest shows I am enjoying right now, I hope #PEMRA notice is not going to stop the show #HUMTV
#ISupportUdaari, iray amin'ireo fandaharana sahisahy indrindra ankafiziko amin'izao fotoana izao, antenaiko fa tsy hampiato ny fandaharan'ny #HUMTV ilay fangataham-panazavàn'ny #PEMRA
#PEMRA won't speak against so many programs promoting religious extremism but were quick to find issues with #Udaari
Tsy ahitan-teny manohitra ireo fandaharana marobe mamporisika ireo fivavahana mahery fihetsika ny #PEMRA fa haingana ery nahita ny olana tamin'ny #Udaari
Urwa Hocane, mpilalao sarimihetsika, izay mandray anjara ao amin'ny “Udaari,” dia tsy mitovy fomba fijery amin'ny mpandrindra milaza fa ” tsy misy fitaizana” ilay seho:
Repost @HELLO_Pak #ISupportUdaari pic.twitter.com/rmBU1qDPd4
Zarao indray @HELLO_Pak #ISupportUdaari
Nanamafy ny fanarahana be ilay tantara mitohy, izay mbola mandeha, ny tsikera mivaivay voarain'ny PEMRA.
‘Ahoana ny Momba ny Fanabeazana Aizana ?’
Tsy ny fanantitranterana ny fanararotana ara-nofo ny ankizy ihany no manahirana ny PEMRA; manohitra ny fanaovana doka momba ny fanabeazana aizana ihany koa ilay masoivoho. Tamin'ny fiandohan'ity volana ity, nandraman'ny PEMRA tamin'ny alàlan'ny famoahana filazàna ny hampiatoana ny fandefasana ireo dokam-barotra rehetra momba ny fanabeazana aizana, tamin'ny fitanisàna ny tombontsoan'ireo “zaza tsy manan-tsiny” sy ny fandrisihana azy ireo ” ho liana ” amin'ny resaka firaisana ara-nofo, raha toa ka fantatry ry zareo ny momba ny fanabeazana aizana, ny fandraràna ny doka momba ny fanabeazana aizana. Tsy niandry ela akory dia nanomboka naneso ny PEMRA ireo mpisera amin'ny aterineto.
Noheverin'ilay mpandraharaha Shakir Husain fa mampalahelo sy tratra aoriana ny fanarahan'ny PEMRA maso ny fahaterahana :
7,4 lavitrisa ny olona eto ambonin'ny tany. avelao ho any izany. tsy tian'ny PEMRA ny fanabeazana aizana amin'ny fahitalavitra.
Nohanihanian'i Parvez A. Faruki, mpisera amin'ny aterineto tamin'ny fomba hafa fa angamba Tiorkia no meloka :
Famadihana ny fanarahamaso ny fahaterahana hoy Erdogan. Aingam-panahy avy aminy ve no nahatonga ny Pemra handrara ny fanabeazana aizana ?
Nanandrana nilaza ny hoavy i Nazima Najee :
Miankina amin'ny toromariky ny Pemra ny hoavin'i Pakistana.
Vetivety teo, nilefitra moramora tamin'ny fandraràny safobemantsina ny fanaovana dokambarotra momba ny fanabeazana aizana ny PEMRA, tamin'ny nanomezany alàlana handefa doka aorian'ny amin'ny 11 ora alina. Na izany aza, dia tsy ampy hampanginana ny ampahan'ny vahoaka izay mahatsapa ny teritery atao amin'ny fahitalavitra, sy mahita izany ho ezaka mba hampanginana sy hampahamenatra ireo te-hiresaka ny olana toy ny fanararaotana ara-nofo ny ankizy izany fanomezandàlana izany.